Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Tanzania Travel and News momba ny fizahan-tany » Drafitra hetsika natomboka mba hitehirizana ny zirafy ao Tanzania
Dimy taona izao ny drafitr'asa momba ny fiarovana ny zirafy dia tanterahina amin'ny fikarohana sy fitehirizana ny zirafy ao Tanzania, kendrena hanavotana azy ireo amin'ny mpandroba sy ny fahasimban'ny tontolo iainana.
Ny zirafy dia hita mirehareha am-pireharehana eo amin'ireo valan-javaboary afrikanina atsinanana any Tanzania, Kenya ary Rwanda.
Ny drafitra ho an'ny fiarovana ny zirafy giraffe 2020 hatramin'ny 2024 dia kendrena amin'ny fanatsarana ny fahalalana momba ny ekolojia ny zirafy, ao anatin'izany ny habetsahany, ny fizarana azy, ny lamina fampiasa amin'ny toeram-ponenana ary ny fitadiavana ny fitadiavana sy fitantanana tsara kokoa.
Ny zirafy no biby hajaina indrindra ao Tanzania eo ambanin'ny drafitra fiarovana mafy ary ankehitriny eo am-pikarohana sy hitahiry drafitra mba hamonjy azy amin'ny voina voajanahary ao anatin'izany ny habetsahany, ny fizarana, ny lamina fampiasan'ny toeram-ponenana, ary ny fitadiavana ny fitadiavana fiarovana sy fitantanana tsara kokoa any an'ala. .
The Tanzania Wildlife Research Institute (TAWIRI) dia nilaza tamin'ny fanambarana iray fa ny Action Plan dia hifantoka amin'ny fikaolojika, aretina ary ny fiantraikany amin'ny fahaveloman'ny zirafy ho an'ny fiarovana sy fitantanana tsaratsara kokoa.
"Ny fitandremana ny zirafy ao Tanzania dia tena manandanja tokoa satria ny biby dia manandanja tokoa amin'ny lafiny maro, ao anatin'izany ny andraikiny ho mariky ny lova voajanahary sy tanindrazana an'i Tanzania", hoy i TAWIRI tamin'ny fanambarana nataony.
"Ankoatr'izay, ny zirafy dia karazana manan-danja amin'ny fampiroboroboana ny fizahan-tany," hoy ny fanambarana. Ny zirafy dia manampy sanda lehibe eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany amin'ny maha-lohalaharana manintona mpizahatany iraisam-pirenena azy.
Ny isan'ny zirafy ao Tanzania dia nihena tao anatin'ny 30 taona lasa noho ny asan'olombelona matetika, ny fihazana tsy ara-dalàna, ny fahaverezan'ny toeram-ponenana noho ny fanitarana ny asan'ny olombelona sy ny aretina.
Ny zirafy, ny biby avo indrindra eto an-tany dia voatanisa amin'ireo biby manerantany miatrika fandrahonana maro isan-karazany ao anatin'izany ny aretina, "hoy i Dr Julius Keyyu, mpikaroka ny bibidia Tanzaniana.
Nilaza izy fa ny aretina mahazo ny zirafy amin'izao fotoana izao dia ny aretin'ny sofina zirafy sy ny aretin-koditra zirafy voalaza ao amin'ny valan-javaboary malaza Mikumi sy Ruaha National Tanzania any atsimo.
Ny fampiroboroboana ny toeram-piompiana dia namporisika ny fahaverezan'ny tany marobe ho an'ny bibidia miaraka amin'ny fandrahonana ho lany tamingana zirafy noho ny fahaverezan'ny toeram-ponenana voajanahary.
Ny drafitra hetsika fiarovana ny zirafy dia namboarina mba hitarika ny fampiharana ny hetsika eo an-toerana sy ho an'ny firenena hitehirizana ny zirafy ao Tanzania, iray amin'ireo biby mpizahatany misarika indrindra.
Karazana hetsika maro no takiana, ao anatin'izany ny fitantanana ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fikarohana, ny fanabeazana ary ny fanatrarana, ary ny fampiharana ny lalàna ary ny paikady fanoherana ny famonoana olona hafa.
Ny mpikaroka dia nanombatombana fa eo amin'ny 20,000 30,000 ka hatramin'ny XNUMX zirafy no hita monina ao Tanzania ankehitriny, saingy miatrika fandrahonana lehibe izay mety hiteraka fandroahana azy ireo.
Tanzania very 400,000 hekitara ny rakotra ala isan-taona miaraka amin'ny fihenan'ny 15 isan-jato ny rakotra zavamaniry voajanahary tao anatin'ny folo taona lasa.
Ny zirafy dia biby ara-tsosialy miaina anaty omby malalaka, tsy an'ny faritra sy misokatra izay avy amin'ny olona vitsivitsy ka hatramin'ny zato mahery.
Ny zirafy dia biby nasionaly ao Tanzania ary arak'izany dia arovan'ny lalàna momba ny fiarovana ny biby dia 5 tamin'ny 2009, izay mandrara ny olona tsy hamono, handratra, hisambotra na hihaza zirafy.
Na dia tsy miresaka mivantana azy ho toy ny biby nasionaly aza ny lalàm-panorenan'i Tanzania, dia malaza sy manan-danja marika ao Tanzania ny zirafy.
Nampiasaina izy io ho mari-drano amin'ireo vola taratasy tanzanianina navoaka tamin'ny fahaleovan-tena tamin'ny 1961 ka hatramin'ny andiany 2011.
Ny fihazana zirafy tsy ara-dalàna indrindra ho an'ny hena, hoditra, taolana ary volo dia misy any Tanzania. Any amin'ny faritra sasany amin'ny firenena, ny tanzaniana dia mampiasa vokatra zirafy koa ho an'ny fitsaboana nentim-paharazana, indrindra ny tsoka sy ny ati-doha, izay inoana fa manasitrana ny tsimokaretina VIH / SIDA, hoy ny mpikaroka ny bibidia.
Ny famonoana zirafy an-dalambe no fandrahonana hafa voalaza fa hampihena ny isa an'io biby malaza io. Tsy fantatra mazava ny habetsaky ny famonoana olona manimba zirafy ao Tanzania, fa ny famonoana olona dia voatanisa any amin'ny faritra maro izay mamakivaky ny arabe ny zirafy.